"Qonnaan bulaan waardiyyaa ta'uu hin qabu" - Taakkale Uumaa Bantii - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Takele uma
Injinar Taakkalee Uumaa finfinnee magaala hunduu akka magaala isaatti ilaalu goona jedhan
Kaayyoon kiyya Finfinnee magaalaa sabaaf sablammii hunda qixa ilaaltuufi hunduu irraa fayyadamu akka taatuu hojjechuudha jedhan Kantiibaa itti aanaan magaala Finfinnee obboTaakkalee Uumaa.
Taakkaleen miseensa mana maree Finfinnee waan hin taneef seera mana maree magaalichaa eeguuf itti aanaa ta'an malee hojii Kantibaa magaalaa hojjetu jedhameera.
Hoogganaa biiroo geejibaa naannoo Oromiyaa ta'uun hanga muudama kanaatti tajaajilaa kan turan obbo Taakkale, magaalota Oromiyaa garaa garaa keessatti kantibaa ta'anii tajaajilaniiru.
Namootni filatamuu obbo Taakaleetti gammadanis mormaniis waltajjiiwwan garaagaraa irratti yaada isaanii ibsaa jiru.
Obbo Taakkaleen dhimma kana ilaalchisee yaada BBC'f kennaniin ''warra na deeggaraniis, warra na mormaniis onnee koorraan galateeffadha, kuni mirga heera biyyaan aragatanii'' jedhan.
''Magaala aadaan, amantaan fi afaan adda addaa keessatti ibsamuudha. Kanaaf kana akka carraa tokkootti qabannee, gidduu gala uummata hundaa akka taatu goonaa'' jedhan.
Jireenya uummata maagaalaa Finfinnee hiyyuumaa keessa jiranii fooyyessuun, hojii dhabdummaa dargaggootaa furuu irratti akka hojjetanis himaniru.
Hanqina mana jireenyaa uummata galii gadi aanaa qabanii furuu, hanqina bishaan dhugaatii fi geejibaa magaalittiis hir'isuun xiyyeeffannoo isaanii akka ta'e dubbataniiru.
Bara 2014 mastar pilaanii qindaawaa magaala Finfinnee irratti yaadni kennan madda yaaddoo fi mormii irratti ka'aa jiru akka ta'e namoonni ni dubbatu.
Obbo Taakkalen garuu 'dubbichi gara biraattti hiikamuu hin qabu, madda yaaddoos ta'uu hin malu' jedhan.
''Wanti yeroo san jedhame Finfinnee qofa osoo hin ta'iin magaalli kamuu, hiyyeessa of keessaa dhiibuu hin qabuu dha kun homaa dhoksaa hin qabu.''
''Namni muraasni lafa qotee bulaarratti badhaadhee, qonnaan bulaafi ijoolleen qonnaan bulaa dafqaan bulaafi waardiyyaa ta'uu hin qabu'' yaada jedhu akka qabaniifi kun ammoo dhimma Oromoo waan ta'eef qofa osoo hin ta'iin nama hundaaf hojjetaa jedhan.
Wanti yeroos dubbatan Finfinnee qofa irratti osoo hin taane magaalota Oromiyaa keessa jiraniis guddinni isaanii hiyyeessaaf warra misoomaa lafa isaanii gadhiisan dhiibuun ta'uu hin qabuudha jedhan.
''Qonnaan bulaa, ijollee qonnaan bulaa fi hiyyeessa hin dhiiba yoo ta'e magaala hin ta'u. Magaala jechuun waan hunda qabatee kan guddatudha'' jedhu obbo Taakkaleen.
Taakkalee Uumaa eenyu?
Obbo Taakalaa Uumaa Bantii akka lakkoofsa Itoophiyaatti Caamsaa 6 bara 1976 Godina Shawaa Lixaa, naannawaa Ambootti dhalatan.
Barnoota sadarkaa tokkoffaa mana baruumsaa Gooroo Soolee fi Tokkeetti baratanii, barnoota sadarkaa lammaffaa ammo Gudarii fi Ambootti xumuran.
Qormaata Biyyoolessaa kutaa 12'n qabxii olaanaa galmeessuun Yunivarsiitii Finfinneetti ramadamanii barnoota Keemikaal Injinariingiin akka lakkoofsa faranjiitti bara 2007 Digirii jalqabaa argataniiru.
Bara 2015ttis Yunivarsiitii Finfinnee irraa gosa barnootaa Invaayiroomental injinariing jedhamuun diigirii lammaaffaa( MSC degree) argataniiru.
Bara kana, ji'oot muraasa duras bulchiinsa geejibaa fi hoggansaa (transport management and leadership) Institiyuutii bulchiinsaa Galiilee Intarnaashinal jedhamurraa diploomaa argataniiru.
Barataa sadarkaa lammaffaafi Yunivarsiitii wiyata turan irraa qabee, nama siyaasa naannoo sanatti beekamtii guddaa qabu Dr. Maraara deeggaraa kan turan Obbo Taakalaan, miseensa dhaaba siyaasaa DHDUO kana ta'an bara 2006tti.
Oromiyaa keessatti waajiraalee garaa garaatti sadarkaaleee garaa garaa irratti ramadamanii uummata tajaajilaa turaniiru.
Waxabajii bara 2007- Fulbaana 2009tti hoogganaa bulchiinsa magaalaa Sulultaa ta'uun, erga tajaajilanii booda gara bulchiinsa magaalaa Hoolotaatti geeddaramuun magaalichas waggaa tokkof bulchaniiru.
Manneen durii 5 Magaalaa Finfinnee keessaa daawwachuu qabdan
Magaala sabbataa fi waajjira misooma lafa magaalaa Oromiyaatti hooggansaan tajaajilaas turaniiru.
Muddee bara 2016 qabee hanaga muudama isaanii haaraa torban kanaattis Hoogganaa biiroo Geejiibaa Oromiyaa turan.
''Bulchiinsa lafaa hammayyeessuu irratti, hojii dhabdummaa dargaggoota Oromoo furuufi waahillan hojii kiyya wajjinis warraaqsa diinagdeen uummata fayyadamaa gochuuf haman danda'u hojjechaan ture'' jedhu obbo Taakaleen.
Gahumsaa fi jijjiirama hojiin agarsisanif magaalota hooggansaan tajaajilan keessatti badhaasota sadii argataniiru.
Kuusaa suuraa, Manneen durii 5 Magaalaa Finfinnee keessaa daawwachuu qabdan
Waggoota 25, Finfinnee: Hojii Barsiisuu Afaan Oromoo fi Godaannisa koo
Daqiiqaa 46 dura